DAAWO: Dhismaha Safaaradda Soomaaliya ee Kenya oo dib loo furay muddo 30 sano kaddib – HalQaran.com
DAAWO: Dhismaha Safaaradda Soomaaliya ee Kenya oo dib loo furay muddo 30 sano kaddib
Nairobi (Halqaran.com) – Dhismaha Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa dib loo furay, kaasi oo aan lagu shaqeyn muddo 30 sano ah.
Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, mudane Axmed Ciise Cawad ayaa xariga ka jaray dhismaha safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Kenya.
Waxaana ka soo qeybgalay munaasabadda xarig ka jarka, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, Safiirrada 10 Dal oo magaalada Nairobi xaruntoodu tahay & Jaaliyadda Soomaaliyeed ku nool dalkaasi.
Safiirka Soomaaliya ee Kenya, Amb.Trasan ayaa xusay in dib u dhiska guriga safaaradda ay ku baxday lacag ka badan 310-kun oo Dollar, taas oo ay dawladdu ay bixisay 200 oo kun oo dollar, halka in ka badan 110 kun oo dollar-na ay bixiyeen Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya.
Isagoona u mahadceliyey Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya sida ay dadaalka ugu bixiyeen kor u qaadista magaca iyo dawladnimada Soomaaliyeed.
Ugu dambeyn, wasiirka arrimaha dibadda ee DF Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad ayaa xusay in dib u dhiska guriga safaaradda ay tahay calaamad muujinaysa dib u kabashada Soomaaliya.
Halka hoose ka daawo Muuqaalka Xarig ka jarka Dhismaha Safaaradda Soomaaliya ee Kenya:
Tags: Danjire, Dhismaha Safaaradda Soomaaliya ee Kenya, dib u furid, muddo sanado badan, Safiir Tarsan, Wasiir Cawad
Somalia re-opens refurbished embassy building in Nairobi +(VIDEO)
RW Rooble ”Xukuumaddayda waxaa saldhig u ah in bulshada Soomaaliyeed ay helaan hannaan caddaaladeed oo…”